ခှငျ့ပွုခကျြမရပမေယျ့ ယနညေ့မှာ ကိုဘီဘရိုငျယနျအမှတျတရ လကျပတျအနကျတှေ ဝတျဆငျကစားမယျ့ အစေီမီလနျ
January 28, 2020 phyo News, Serie A 0
အစေီမီလနျအသငျးဟာ ယနညေ့ကစားရမယျ့ တိုရီနိုနဲ့ ကိုပါအီတာလီယာဖလားပှဲစဉျမှာ အာဏာပိုငျတှရေဲ့ခှငျ့ပွုခကျြမရပမေယျ့ ဘကျစကတျဘောဂန်ထဝငျကစားသမားကွီး ကိုဘီဘရိုငျယနျအမှတျတရအဖွဈ လကျပတျအနကျတှေ ဝတျဆငျကစားသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
အစေီမီလနျအသငျးရဲ့အမာခံပရိသတျဖွဈတဲ့ ဘရိုငျယနျဟာ တနင်ျဂနှနေကေ့ ကယျလီဖိုးနီးယားမှာ မတျောတဆရဟတျယာဉျပကျြကမြှုကွောငျ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့ရပွီး အသကျ ၁၃နှဈအရှယျရှိ သမီးဖွဈသူအပါအဝငျ ရဟတျယာဉျပျေါ ပါလာသူ ၉ဦးစလုံး ကှယျလှနျသှားခဲ့ရပါတယျ။
အသကျ ၄၁နှဈအရှယျရှိ ဘရိုငျယနျ ရုတျတရကျကှယျလှနျသှားခဲ့လို့ ကမ်ဘာ့အားကစားလောကတဈခုလုံး အံ့အားသငျ့ထိတျလနျ့တုနျလှုပျခဲ့ကွပွီး အစေီမီလနျအသငျးကလညျး အမရေိကနျဘကျစကတျဘောဂန်ထဝငျကွီးကို အမှတျတရအနနေဲ့ ဂုဏျပွုဖို့ စီစဉျထားတာဖွဈပွီး ဒီလိုလုပျဖို့ ခှငျ့ပွုခကျြမရတာတောငျမှ အစေီမီလနျက သူတို့ရဲ့ဝမျးနညျးပူဆှေးမှုကို ပွသဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
စီးရီးအဘေောလုံးအဖှဲ့ခြုပျက အိမျကှငျးပှဲမှာ အနကျရောကျလကျပတျ ဝတျဆငျကစားဖို့ အစေီမီလနျအသငျးရဲ့တောငျးဆိုခကျြကို လိုကျလြောဖို့ ငွငျးဆနျခဲ့ပမေယျ့ အစေီမီလနျကတော့ မူလအစီအစဉျအတိုငျး ဆကျလုပျဖို့ ဆုံးဖွတျထားပါတယျ။ ပွီးတော့ ပှဲမစခငျမှာပဲ ဝမျးနညျးကွောငျး ၁မိနဈငွိမျသကျ ဆုတောငျးမှာဖွဈပွီး ဆနျစီရိုကှငျးမှာ ပရိသတျ ၃၅၀၀၀ ကြျော လာရောကျကွညျ့ရှုမယျလို့ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။
”အစေီမီလနျအသငျးပရိသတျလညျးဖွဈ၊ အားကစားသမိုငျးတဈလြှောကျ ထာဝရအကွီးကယျြဆုံးအားကစားသမားတဈဦးဖွဈတဲ့ ဘရိုငျယနျရဲ့အဖွဈဆိုးကို ကွားသိလိုကျရလို့ ဘယျလောကျခံစားရတယျဆိုတာ ပွောပွဖို့ စကားလုံးတောငျမရှိပါဘူး။ ဒီဖွဈရပျဆိုးကွီးမှာ ပါသှားသူအားလုံးရဲ့မိသားစုဝငျတှနေဲ့အတူ အစေီမီလနျအသငျးလညျး ထပျတူဝမျးနညျးမိပါတယျ။ ဘရိုငျယနျကိုလညျး ဘယျတော့မှမမှေ့ာမဟုတျပါဘူး”လို့ အစေီမီလနျအသငျးက လူမှုမီဒီယာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ဘရိုငျယနျဟာ ငယျဘဝက မီလနျမွို့မှာ နှဈကာလအတျောကွာနထေိုငျခဲ့ဖူးပွီး အစေီမီလနျအသငျးရဲ့အမာခံပရိသတျတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ. ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ ဘရိုငျယနျက ”ကြှနျတျောဟာ အစေီမီလနျအသငျးအမာခံပရိသတျအဖွဈ ကွီးပွငျးလာခဲ့တာပါ။ ကြှနျတျောတို့ခတျေတုနျးက ဗနျဘကျစတနျ၊ ရဈကတျ၊ ဂူလဈ၊ မာလျဒီနီတို့ ရှိနခေဲ့တာပါ။ ပွီးတော့ ဘာရီဆီလညျး ရှိပါတယျ။ အဲဒါက ကြှနျတေျာ့အသငျးပါ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ခွင့်ပြုချက်မရပေမယ့် ယနေ့ညမှာ ကိုဘီဘရိုင်ယန်အမှတ်တရ လက်ပတ်အနက်တွေ ၀တ်ဆင်ကစားမယ့် အေစီမီလန်
အေစီမီလန်အသင်းဟာ ယနေ့ညကစားရမယ့် တိုရီနိုနဲ့ ကိုပါအီတာလီယာဖလားပွဲစဉ်မှာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပေမယ့် ဘက်စကတ်ဘောဂန္ထ၀င်ကစားသမားကြီး ကိုဘီဘရိုင်ယန်အမှတ်တရအဖြစ် လက်ပတ်အနက်တွေ ၀တ်ဆင်ကစားသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အေစီမီလန်အသင်းရဲ့အမာခံပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ ဘရိုင်ယန်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့က ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ မတော်တဆရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျမှုကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပြီး အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်ရှိ သမီးဖြစ်သူအပါအ၀င် ရဟတ်ယာဉ်ပေါ် ပါလာသူ ၉ဦးစလုံး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၄၁နှစ်အရွယ်ရှိ ဘရိုင်ယန် ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့အားကစားလောကတစ်ခုလုံး အံ့အားသင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ကြပြီး အေစီမီလန်အသင်းကလည်း အမေရိကန်ဘက်စကတ်ဘောဂန္ထ၀င်ကြီးကို အမှတ်တရအနေနဲ့ ဂုဏ်ပြုဖို့ စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဒီလိုလုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်မရတာတောင်မှ အေစီမီလန်က သူတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကို ပြသဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စီးရီးအေဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က အိမ်ကွင်းပွဲမှာ အနက်ရောက်လက်ပတ် ၀တ်ဆင်ကစားဖို့ အေစီမီလန်အသင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်လျောဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့် အေစီမီလန်ကတော့ မူလအစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ပွဲမစခင်မှာပဲ ၀မ်းနည်းကြောင်း ၁မိနစ်ငြိမ်သက် ဆုတောင်းမှာဖြစ်ပြီး ဆန်စီရိုကွင်းမှာ ပရိသတ် ၃၅၀၀၀ ကျော် လာရောက်ကြည့်ရှုမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
”အေစီမီလန်အသင်းပရိသတ်လည်းဖြစ်၊ အားကစားသမိုင်းတစ်လျှောက် ထာဝရအကြီးကျယ်ဆုံးအားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘရိုင်ယန်ရဲ့အဖြစ်ဆိုးကို ကြားသိလိုက်ရလို့ ဘယ်လောက်ခံစားရတယ်ဆိုတာ ပြောပြဖို့ စကားလုံးတောင်မရှိပါဘူး။ ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးမှာ ပါသွားသူအားလုံးရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူ အေစီမီလန်အသင်းလည်း ထပ်တူဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ဘရိုင်ယန်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး”လို့ အေစီမီလန်အသင်းက လူမှုမီဒီယာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဘရိုင်ယန်ဟာ ငယ်ဘ၀က မီလန်မြို့မှာ နှစ်ကာလအတော်ကြာနေထိုင်ခဲ့ဖူးပြီး အေစီမီလန်အသင်းရဲ့အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်. ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ဘရိုင်ယန်က ”ကျွန်တော်ဟာ အေစီမီလန်အသင်းအမာခံပရိသတ်အဖြစ် ကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းက ဗန်ဘက်စတန်၊ ရစ်ကတ်၊ ဂူလစ်၊ မာလ်ဒီနီတို့ ရှိနေခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ ဘာရီဆီလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော့်အသင်းပါ”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကာလရှညျဖွဈပျေါခဲ့တဲ့အပွောငျးအရှပေုံ့ပွငျတဈပုဒျ အဆုံးသတျ….အဲရဈဆငျကို ၄နှဈစာခြုပျခြုပျဆိုကာ အငျတာ ချေါယူ